कोरोना विश्व अपडेटः १ करोड ८५ लाख नाघे संक्रमित, कति पुगे मृतक ? (विवरणसहित) « Lokpath
कोरोना विश्व अपडेटः १ करोड ८५ लाख नाघे संक्रमित, कति पुगे मृतक ? (विवरणसहित)
प्रकाशित मिति :5August, 2020 12:00 am
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारण यो समाचार तयार पार्दासम्म ७ लाख ४ सय ७५ जनाको ज्यान गएको छ । हालसम्म विश्वभरका १ करोड ८५ लाख ७६ हजार ६ सय २६ जनामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । हालसम्म विश्वभरबाट १ करोड १७ लाख ८६ हजार ९४ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । भने संक्रमितमध्ये ६५ हजार ७ सय ४२ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्म सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमणको असर देखिएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकामा १ लाख ५९ हजार ४ सय ५७ जनाको ज्यान गइसकेको छ । बितेको २४ घण्टामा २० हजार ५ सय ७० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ४८ लाख ८२ हजार ७ सय ४४ पुगेको छ । हालसम्म २४ लाख ५५ हजार १ सय ४५ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमितमध्ये १८ हजार ७ सय ६ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै बितेको २४ घण्टामा मात्र ५ सय २९ जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ ।
त्यस्तै ब्राजिलमा बितेको २४ घण्टामा ७ हजार ७ सय ७१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या २७ लाख ५९ हजार ४ सय ३६ पुगेको छ । हालसम्म ब्राजिलमा कोरोनाको कारण ९५ हजार ७८ जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ । वल्डोमिटरको तथ्यांक अनुसार १९ लाख २१ हजार ३ सय १९ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमितमध्ये ८ हजार ३ सय १८ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । भने बितेको २४ घण्टामा मात्र कोरोनाको कारण ३ सय ७६ जनाको ज्यान गएको छ ।
त्यस्तै छिमेकी देश भारतमा हालसम्म कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ३९ हजार ८ सय १८ पुगेको छ । बितेको २४ घण्टामा ५० हजार ७ सय ९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या १९ लाख ६ हजार १ सय २१ पुगेको छ । हालसम्म १२ लाख ८० हजार २ सय ८४ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै बितेको २४ घण्टामा मात्र कोरोनाको कारण ८ सय ४७ जनाको ज्यान गएको र संक्रमित मध्ये ८ हजार ९ सय ४४ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै रसियामा हालसम्म कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १४ हजार ३ सय ५१ पुगेको छ । बितेको २४ घण्टामा ५ हजार १ सय ५९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको र १ सय ४४ जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ । हालसम्म ८ लाख ६१ हजार ४ सय २३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । भने संक्रमितमध्ये ६ लाख ६१ हजार ४ सय ७१ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । भने संक्रमितमध्ये २ हजार ३ सय जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा हालसम्म कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ हजार ५ सय ९ पुगेको छ । हालसम्म ५ लाख १६ हजार ८ सय ६२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । त्यस्तै संक्रमितमध्ये ५ सय ३९ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र ३ लाख ५८ हजार ३७ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ ।
पेरुमा हालसम्म पेरुमा १९ हजार ८ सय ११ जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ । त्यस्तै ४ लाख ३३ हजार १ सय जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । त्यस्तै हालसम्म २ लाख ९८ हजार ९१ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमितमध्ये १ हजार ४ सय १९ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मेक्सिकोमा बितेको २४ घण्टामा ४ हजार ७ सय ६७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ४ लाख ४३ हजार ८ सय १३ पुगेको छ । हालसम्म कोरोनाको कारण ४८ हजार १२ जनाको ज्यान गएको र पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र २ सय ६६ मृतक थपिएको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ । हालसम्म मेक्सिकोमा २ लाख ९५ हजार ६ सय ७७ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमितमध्ये ३ हजार ८ सय ८३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै चिलिमा हालसम्म कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ९ हजार ७ सय ४५ पुगेको छ । चिलिमा बितेको २४ घण्टामा १ हजार बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ३ लाख ६२ हजार ९ सय ६२ पुगेको छ । त्यस्तै संक्रमितमध्ये ३ लाख ३६ हजार ३ सय ३० जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ । भने संक्रमितमध्ये १ हजार ४ सय ५ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै स्पेनमा यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या २८ हजार ४ सय ९८ पुगेको छ । हालसम्म ३ लाख ४९ हजार ८ सय ९४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको र संक्रमितमध्ये ६ सय १७ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । वल्डोमिटरको तथ्यांक अनुसार स्पेनमा बितेको २४ घण्टामा २६ जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ र ५ हजार ७ सय ६० जनामा संक्रमण फैलिएको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ ।
भारतमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित कहाँबाट आएका थिए ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले सारा विश्वमा नै व्याप्त छ । कोरोना
बाँके । बाँकेमा आज थप दुई जना कोरोना संक्रमित मृत्यु भएको छ ।
चालकमा कोरोना, नगरपालिका सील
बैतडी । बैतडीको मेलौली नगरपालिकालाई सिल गरिएको छ । आज नगरपालिकामा कार्यरत एक